Digitalis | November 2019
Saamaynta daaweynta malab-uterine on jidhka bini'aadamka, gaar ahaan diyaarinta jelly boqornimada
Ugu Weyn Ee Digitalis
Digitalis ama magaciisa luuqada Latinis (Digitalis), oo u tarjuma sida farta. Magaca dhirta la helay qaabka corolla, waxay u egtahay taako, tanina waxay ku baxday magaca Ruush - digitalis. Geedkani wuxuu ka tirsan yahay qoyska qorsheysan. Dunida waxaa jira 25 nooc oo dhir ah oo loo yaqaano nin.
"Mowqifka cusub ee reer miyiga ah": beeralayda Polish ayaa bilaabay in ay wax ka qabtaan tallaabooyinka maamulka
Qarsoonaanta daryeelka guriga ee loo yaqaan "Myrt communis"
Yaanyo Tijaabin: sharaxaad kala duwan, dhalid, beerid iyo daryeel
Cabbitaanka dambarka: faa'iidooyinka iyo dhibaatada
Karoot "Nantes": sharaxaad, beeritaanka iyo daryeelka
Heerka caadiga ah (Calluna vulgaris) waa saaxiibkayaga "saaxiib" ee reerka heera, oo loo yaqaan daawada dadweynaha ee tiro badan oo ah daawooyin oo loo isticmaalo guusha weyn. Warshadu waxay heshay meesha iyo mahadsanidiisa muuqaalkeeda. Intaa waxaa dheer, heather waa wax caadi ah, taas oo xallisa dhibaatada leh soo iibinta alaabta ceeriin ah. Read More
Sidee si sax ah u codsan kartaa Corado ka dhanka ah Colorado baradho baradho?
Sare 6 hababka ugu wanaagsan ee lagu kori karo geedo yaanyo. Ikhtiyaaraha soo socda iyo talooyin waxtar leh
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Digitalis 2019